Home News VIDEO:-Wasiir Khadiija iyo Xildhibaano isla Niikinaya iyo Ceebta iyo anshax-xumida ay Muqdisho...
VIDEO:-Wasiir Khadiija iyo Xildhibaano isla Niikinaya iyo Ceebta iyo anshax-xumida ay Muqdisho ay ka wadaan!!
Dhawaan Maamulka Gobolka Banaadir waxaa uu si rasmi ah u joojiyay in aan xeebta liido lagu gaari karin waxii ka dambeeya 12:00 Saqda dhexe iyagoo u sababeeyay in lagu tumto ama lagu sameeyo falal aan anshax aheeyn.
Amarkaasi oo uu soo saaray Gudoomiye Cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisoow waa uu dhaqan galay
Waxaa arintaas kasii daray markii la helay muuqaal kooban oo lagasoo duubay wasiir dhalinyarada iyo ciyaaraha Marwo khadiija Maxamed Diiriye .
Xildhibaano ayaa goobta joogay kuwaasi oo qaarkood mid mid usoo istaajinaayo khadiija maxamed diiriye,waxaa ceeb ah in qof leh maqaamkaasi in uu sameeyo fal nuucaan ah .
Dadka isticmaalo baraha bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka bixinaayo falkaan”Marka Ay halkas mareyso,Xalku ma fiicna,Dal dhan oo muslim ah marka
Xildhibankiisa iyo waziirkisa qof kaas yahay,Waaa ayaaan daro,Qofka noocas ah wax masuulad ah ,In lagu aamino waa yaan daro”Hadalo nuucaas ah iyo kuwa kale ayaa la isku weeydaarsanayaa.
Inkastoo aysan kala aqoon ceeb iyo ceeb la’aan hadana waxaa ay hormuud u tahay kooxaha ka qeeyliya meel walbo ee NABAD IYO NOLOL